आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी ज’न्माउने ६ सुत्र ! के भन्छ अध्ययन? जान्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी ज’न्माउने ६ सुत्र ! के भन्छ अध्ययन? जान्नुहाेस्
admin October 22, 2020 October 22, 2020 जीवनशैली, समाज, स्वास्थ्य	0
यौ*न सम्प*र्कको समयमा पुरुषको वाइ क्रोमोजोम र स्त्रीको एक्स क्रोमो*जोमको मिलन भएमा छोरा र पुरुषको एक्स क्रोमो*जोम र महिलाको एक्स क्रोमो*जोमको मिलन भएमा छोरी जन्मने गर्दछ । कुनै पनि स्त्री परिपक्क भएपछि रजस्वला चक्र सुरु हुने गदर्छ भने यो चक्र साधारण तया १२–१४ वर्ष देखि सुरु भएर ५०-५५ वर्ष भित्र बन्द हुने गदर्छ । स्त्रीमा रजस्वला चक्र २८ दिनको हुने गदर्छ । कसैकसैमा भने केही दिन अघि र केहीदिन पछि पनि हुन सक्छ ।
प्रत्येक २८ दिनमा रजस्वला हुने स्त्रीमा करिव १४ औं दिनमा डिम्व निस्काषन हुने गदर्छ र २४ औं दिनसम्म रहन्छ । यो अवधिमा स्त्री र पुरुष विच यौ*नस*म्र्प*क हुन गएमा गर्भ रहन्छ । स्त्री र पुरुष विच यौ*न सम्र्प*क भएको २४ देखि ४८ घन्टा सम्ममा शुक्रकिटले डिम्वलाई भेटेमा गर्भ रहन्छ अन्यथा शुक्रकिटहरु नष्ट हुने गर्दछन् ।
यौ*न स*म्पर्कको समयमा पुरुषद्धारा २० लाख शुक्रकीट छाडेपनि ति मध्य स्वास्थ्य र सक्रिय शुक्रकीट मात्र डिम्वलाइ भेटाउन डिम्ववाहिनी नलीतर्फ बढदछन् यसरी अगाडि वढने क्रममा केहि शुक्रकीटहरु एकआफ्मा गुचमुचिएर नष्ट हुने गदछर्न भने केहि शुक्रकिट वाटो विराएर डिम्व नभएको डिम्ववाहिनी नली तथा पाठेघरको मुखसम्म पुगेर नष्ट हुने गर्दछन् । करिव २०० जति शुक्रकीट मात्र डिम्वको नजिक पुग्न सफल हुन्छ ।
यी २०० शुक्रकीटहरुमध्य पनि एउटा स्वस्थ्य र सक्रिय शुक्रकीटलाइ डिम्वको माइक्रोभिलाले च्याप्छ र अरु शुक्रकीटलाइ पस्न दिदैन । तपाईलाई छोरा जन्माउने चाहना छ भने तपाईले वाइ क्रोमोजोमयुक्त शुक्रकीटलाई सक्रिय वनाउनु पर्ने हुन्छ भने छोरीको चाहना हुनेले एक्स क्रोमोजोमलाई सक्रिय वनाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसका साथै स्त्रीको यौ*ना*ङ्गमा अम्लीयपना र क्षारीयपना मिलाउनु पदर्छ यौ*ना*ङ्गमा भएको अम्लीयपनाले छोरी जन्माउन एक्स क्रोमोजोमयुक्त शुक्रकीटलाई सक्रिय बनाउन सहयोग पुग्दछ ।चिनियाँ बैज्ञानिकहरुले लामो समय र अनुसंधानपछि पत्ता लगाईएको यो प्रविधि ९९.९ प्रतिशत सफल भएको छ । तपाई पनि ढुक्कका साथ यो प्रविधि अपनाउनुहोस् । इच्छा र चाहाना तपाईको छोरा या छोरी पाउने जिम्मा श्रीमतिको । शुरुमा, चाइनीज विशेषज्ञद्धारा आविष्कार गरिएको यो प्रविधिमा धेरैले शंका गरेका थिए ।
चाइनिज लुनार क्यालीन्डरको अध्ययनले देखाए अनुसार , आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने सुत्र यस्ता छन् । (१) पहिलो : यदि तपाई छोरा जन्माउन चाहनु हुन्छ भने स्त्री रजस्वला भएको दिन देखि अण्ड उत्पादन हुने दिनसम्म सहवास गर्नु हुदैंन । यसो गर्दा पुरुषमा वाइ क्रोमोजोमयुक्त शुक्रकीटको बृद्धि हुनुका साथै महिलाको यो*ना*ङ्गमा क्षारीयपना आउन मद्दत गर्दछ जस्का कारण छोरा जन्मन्छ ।
(२) दोश्रो : स्त्रीको यो*नी नजिकै अम्लीय वातावरण बढि हुने गदर्छ सहवास गर्दा वी*र्यलाई यो*नीनजिकै छाडिदिने हो भने छोरी जन्मन्छ । यदि सहवास गर्दा लि*ङ्गलाई एकदम भित्र छिराएर सवै वीर्य भित्रै स्ख*लन गराउने हो भने छोरा जन्मन्छ किनभने पाठयघरको मुख नजिकै क्षारीय वातावरण बढि हुन्छ यसले गर्दा वाइ क्रोमोजोमयुक्त शुक्रकिट सक्रिय हुन्छ ।
(३) तेश्रो : महिलाको प्रत्येक दिनको तापक्रम तीन चार महिना सम्म मापन गर्ने अघिपछि भन्दा बढि तापक्रम भएको दिन सहवास गर्दा वाइ शुक्रकीट सक्रिय हुन्छ र छोरा जन्मीन्छन् । (४) चौथो : कसिला कपडा लगाउने पुरुषहरुको वाइ क्रोमोजम युक्त शुक्रकीट नष्ट हुन्छ र छोरी जन्मीन्छ ।
(५) पाँचौ : छोरी जन्माउन चाहनु हुन्छ भने गर्भ रहनु भन्दा तीन चार महिना अघि देखिनै क्यालसीयम र म्याग्नेसियम युक्त खानेकुरा खानु पर्छ भने छोरा जन्माउन चाहनेले पोटासियम र सोडिएम युक्त खानेकुरा खानु पर्छ । (६) छैठौ : चाइनिज लुनार क्यालीन्डर अनुसार कुनै महिला १८ वर्षको उमेर जनावरी महिनामा गर्भवती भएमा छोरी र डिसेम्वरमा गर्भवती भएमा छोरा हुन्छ । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला